ဆုံဆည်းရာ: ကာလာမသုတ်တော် နှင့်ဝေဘန်ရေး
by Mahar Manapim
Friday, September 2, 2011 at 4:21am
ငါ့ဘာသာမို့ မှန်တယ်ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးကို ဘုရားက ဘယ်နေရာမှာမှ မဟောခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် စဉ်းစားဖို့သာ တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာအင်မတန်ကောင်းလှတဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၀င်ပြီးလေ့လာကြပါ။ သို့သော် တိတိကျကျတော့ လေ့လာပါ။ ဟိုလူ ဒီလူရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို မဖတ်ဘဲ ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ ပါဠိတော်များကို အဓိပ္ပါယ် ကျကျနန နားလည်အောင် လေ့လာစေချင်ပါတယ်၊ တစ်ချို့က ကိုယ့်ဘုရားရှင်ကို အလွန်ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ အလွန်အကြူး ချီးကျူးပူဇော်ဂုဏ်ပြုထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်..။ ဒါဟာ ဘာသာတိုင်းလိုလိုပါပဲ။ ထိုစာတွေကို ဖတ်ပြီး ဝေဖန်မနေဘဲနဲ့ တိုက်ရိုက်ဘုရားဟောတွေကို ၀င်ဖတ်ကြည့်ပါ။ သိပ္ပံနဲ့လည်း အလွန်ကိုက်ညီပါတယ်။ ရုပ်ကို ခွဲခြမ်းတာတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကတည်းက ဘုရားက အရာအားလုံးကို သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ ဟောခဲ့ ပြောခဲ့ပြီးသားပါပဲ။ သိပ်မကြာတတ်သေးခင်ကမှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ခွဲခြမ်းနိုင်တာပါ. ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေက ဆင်းရဲတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဖြန့်နိုင်လို့သာ ရှေးကျတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကို လူတွေက မသိခဲ့ကြရတာပါ။ သို့ဆိုလျှင်ဖြင့် တစ်ချို့သောသူတို့က ပြောကြပါလိမ့်မည်။ သူတို့က လက်တွေ့ဆန်တယ် ။ ဗုဒ္ဓဘုရားက လက်တွေ့ဟုတ်လို့လားလို့ မေးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်--- ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပြန်မေးသွားပုံလေးနဲ့ပဲ ဒီဆောင်းပါးလေးကို အဆုံးသတ်လိုက် ချင်ပါတယ်..။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက လက်တွေ့ဝါဒီသမားတွေကို ဒီလိုမေးခဲ့ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လက်တွေ့ဆိုတာတွေကို အမောင်တို့က ဘယ်တုန်းကများ သွားလက်တွေ့လိုက်တာတုန်း.. ဘုရားရှင်ရဲ့ စကားတော်တွေက လက်တွေ့မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုရအောင် အမောင်တို့က ဘယ်တုန်းကများ လာပြီး လက်တွေ့မဟုတ်လိုက်တာတုန်း.. ဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။
Posted by ဖိုးညို at 8:04 PM
ငါ့ညီ မောင်ဖိုးညို မင်းရိုးသားပါကွာ..။ ငါ့က အရှင်ဇဋိလပါပဲ ..။ မင်းရေးထားတယ် ဆိုတဲ့ ကာလာမသုတ်တော်နှင့် ဝေဘန်းရေး ဆိုတဲ့ ပို့စ်က ငါ့ရဲ့ ငရဲဆိုတာ ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်နဲ့ အကုန်လုံးကို (လုံးဝ လုံးဝ) ကိုတူနေပါရောလား ပြောရရင်ကွာ ပုဒ်ထီး ပုဒ်မလေးတောင် မလွဲသွားပါဘူး..။ ခေါင်းစဉ်လေး ပြောင်းတတ် တတ်တာနဲ့ မင်းပို့စ် ဖြစ်သွားရောလား မြန်မာပီသပါပေတယ် ငါ့ညီ..။ မင်းနဲ့ငါနဲ့က သိတောင်မသိဘဲနဲ့ ဘယ်နှယ့်ကြောင့် ငါ့ အိမ်မက်က မင်းအိမ်မက် ဖြစ်သွားရတာလဲကွာ ..။ ကဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ ဒီဘလော့ နှစ်ခုကို ယှဉ်ကြည့်စေဗျာ..။ http://soneseayar.blogspot.coာ/
သေချာ တာကတော့ မွတ်စလင် ဝါဒ ဟာ ဘာနဲ့ တူလဲ ဆိုတော့ ၊ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ နတ်ကိုးကွယ် တာနဲ့တူပါတယ်။။။ ရင်ထဲမှာအကြောက်တရားနဲ့ ကိုးကွယ်ရပါတယ်။။။ ဒီတော့ အချိန်မှန် ဝတ်ပြု မှူကို အကြောက်တရား တဝက် နဲ့ ပြုနေရ ပါတယ်။။။ ခရစ်တော် ကတော့ရှင်းပါတယ်။။။ လုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့ ကွာ၊ လာဝန်ခံလိုက်။။။ အိုကေပဲ။။။ ထာဝရ ဘုရားလား? လူတွေကို ဖန်တီး ခဲ့ တာလဲ သူ ပဲ၊ ပန်းသီးကို ဖန် တီးတာလဲသူပဲ၊ မြွေကိုဖန်တီး တာလဲသူပဲလေ။။။ ရှင်း ပါတယ်။။။ အရာ အားလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ် ဆို ကောင်းတာရော၊ မကောင်းတာရောက သူ့ကြောင့်ပဲပေါ့။။။